Lalao Afrikana: famintinana ny voka-dalao, omaly | NewsMada
Lalao Afrikana: famintinana ny voka-dalao, omaly
Raraka teo amin’ny dingana ampahavalon-dalana ny atleta malagasy, taranja tenisy ambony latabatra, ho an’ny fifaninanana isam-bondrona. Lavon’i Ghana tamin’ny seta 3 no ho 2 izy telo mirahalahy nilalao: i Lino, i Nativel ary i Setra. Tsahivina fa fandresena iray nanoloana an’i Kenya, 3 no ho 0, sy faheresena iray, nanoloana an’i Nizeria, 3 no ho 0, ny azon’ny Malagasy, nandritra ny andro voalohan’ny fifanintsanana, nitondra antsika ho eo amin’ny laharana faharoa tao anaty vondrona. Notapahin’ity faharesena, omaly, ity anefa ny nofinofin’ireto solontena malagasy ireto ka nijanona teo amin’ny ampahavalon-dalana ny lalana. Ny fifaninanana isam-bondrona anefa no tapitra fa mbola misy ny ho an’olon-tokana izay mbola handraisan’ny Malagasy anjara, eo amin’ny taranja tenisy ambony latabatra.
Tafakatra ho amin’ny dingana ampahefa-dalana i Madagasikara satria naharesy an’i Maraoka, omaly, tamin’ny andro faharoan’ny fifanintsanana, taranja basikety. Tamin’ny isa 22 no ho 10 ny nandavoantsika an-dry zareo Maraokanina. Voka-dalao hafa kosa, tsy nahatohitra ny ekipan’i Egypta ny ekipa malagasy, nifanohitra tanteraka ny tamin’ny andro voalohany ny voka-dalao satria lavon’ny Egyptianina tamin’ny isa 22 no ho 14 ny solontenantsika. Ho amin’ny rahampitso, hanao ny fifaninanana ho an’olon-tokana, eo amin’ny “shooy out contest”, i Elly ary ny “dunk” kosa ho an’i Arnold.
Fahadisoam-panantenana ! Tsy tafakatra ho amin’ny lalao ampahavalon-dalana Andrianarivelo Marco Jérôme, sokajy latsaky 52 kg, taranja ady totohondry. Niady voalohany izy omaly ary izao lavo izao. Teratany zambianina, i Mulenga Everisto, no nanilika azy tamin’ny isa 5 no ho 0 ka tsy nahazoan’ity solontenantsika ity ny tapakila hiatrehana ny dingana manaraka. Tsahivina, manohy ny lalany ho amin’ny ampahavalon-dalana kosa i Tony, rehefa avy nandavo an’i Banda Ben, avy any Zambia, ity farany izay tena andrandraina tanteraka hitondra fandresena hatrany, ao anatin’izao andiany faha-12 ny “Lalao afrikanina”, tanterahina any Maraoka, izao.